Ukunyamekela impilo yakho ngumkhwa omuhle. Luncedo. Nokwenza imodeli. Yonke intombazana efanelekileyo ifanele ilandele ukutya, ungaphuzi, ungabhemki kwaye ubuncinane ubuye utyelele i-gym. Mhlawumbi uhluma ii-oats kwifestile kwaye ungadli emva kwe-18: 00 ... Kodwa kutheni, le nto iziphatha kakubi kumadoda? Makhe sibone! Izindlela zomntu ngamnye zokunyamekela impilo yintloko yethu incoko namhlanje.
Kungenzeka ukuba imemori yasendulo yemvelo iyathetha kuthi. Yaye yatsho into enje: "Umntu ungumlwi, umzingeli, u-getter. Ibhizinisi lakhe lijonganisa impilo yakho ngokufanelekileyo, kwaye kungabi ukuqokelela." Ukuba umlobi nomzingeli banomdla kakhulu malunga nomzimba wabo, ngoko impilo isele ilahlekile (kwaye ke ngoko, wena, umfazi, akukho nzuzo), okanye ayinakucinywa, kodwa awuyi kusetyenziselwa oko (oko kukuthi, kwakhona akukho).
Ngokubanzi, amadoda, achaphazelekayo ngempilo yabo, ahlulwe zibe ziindidi ezinkulu. Indlela yokuzibandakanya nabo (nokuba uyayidinga) - siya kuqonda.
Uyabetha yonke into - ukusuka esiswini, ichithelwa ngamasikeji kwiindawo zokutya zesikolo, kumnwe omncinci kumlenze wakhe osekhohlo. Nsuku zonke uyaziphulaphula aze ahlanganyele nawe amava.
Isizathu salo mzekelo sinokunyamekela ngokunyamekela ebuntwaneni, okanye, ngokuchaseneyo, ukungabikho kwengqalelo yabazali, okubuhlungu bubuhlungu ngumfana. Kwimeko yokuqala, abazali (ngokuphindaphindiweyo, ngokwenene, umama) banakekele unyana wabo othandekayo kuyo nayiphina imirhumo kunye nokugqithisa ngokugqithiseleyo: naye unobuncwane, unobunzima kunye nobuhlungu.
Emva kwexesha, le nkwenkwe isetyenziswe kule mfanekiso kwaye iziva igule.
Kwimeko yesibini, abazali, banomdla kakhulu emsebenzini, khumbula ukuba banomntwana, kwaye bahlale naye kuphela xa egula. Umntwana ngokukhawuleza ugqithisa izigqibo aze aqale ukusebenzisa impilo yakhe njengesixhobo sokungena. Xa uneminyaka yobudala, lo mkhuba ulungiswe - kwaye nanko u-hypochondriac, owathi ngenye indlela akwazi ukuba nokwakha ubudlelwane.
Kutheni ukhona naye?
Abasetyhini bahlala beba novelwano ngothando. Umsebenzi wesisu: Ndabona obuthakathaka, engenakukhuseleka-ndifuna ukuzisola nokukhathazeka. Kwaye ndazibandakanya.
Ukuba ucinga ngako, kuyacaphukisa ukungabikho komntu osondeleyo. Ubonakala ngathi, kodwa wenza konke wena. Kwaye uthatha izigqibo kuphela. I-Hypochondriac ngokuqhelekileyo iyancitshulwa kwaye ayilungiseleli: bayagula, bayingozi ukukhathazeka. Izindlela zomntu ngamnye zokunakekelwa kwezempilo abangayisebenzisiyo.
Indlela yokuphila ngakumbi
I-Hypochondriacs ayikwazi ukunandipha ubomi. Zonke iinzame zokumenza abe nolonwabo ngakumbi ziya kuhlala zingenaziqhamo. Ngoko akudingeki ukuba uphendule indlu yakho kwisibhedlele. Ukugcina "abantu abaninzi abagulayo ehlabathini" kukho iingcali - iingqondo zengqondo, izazi zengqondo, iingqondo ze-psychotherapists. Baya kunceda ... Ukuba, ngokuqinisekileyo, isigulane sifuna.
Asikho ngesiRashiya, umyili womzimba. Ukholelwa ngokunyanisekileyo ukuba emzimbeni ophilileyo - umoya ophilileyo, ngenxa yokuba uyakha rhoqo kwaye uphucule umzimba wayo: apha i-delta iya kugxothwa, kukho inhlabathi enkulu, kunye ne-trap to tighten. Ekudleni kwemithombo yamaprotheni, onjiniyela bencinci ... kwaye ukuba unako ukuyifumana, i-steroids iyinto encinane. Iimpawu malunga nomzimba kunye nomoya wezandi eziqingqiweyo, kufuneka ndithi, ngaphandle. Umzimba ulusu, izihlunu kunye namathambo. Isibindi kunye neentso - ziyitshisa ngomlilo, azibonakali. Umoya-oku kukunika amandla, ukunyanzelisa ukuba atshintshe intsimbi imihla ngemihla kwindawo yokuzivocavoca ngeeyure ezingama-6 okanye ukuphosa ngokwakhe kwi tatami. Inkondlo yintombazana okanye ubuncinane i-sms-ka phakathi kwelanga akusiyo umoya, iyinyoka.
Icandelo ngalinye kufuneka lihlalutye ngokukodwa ngoncedo lweendlela ezizodwa zokunakekelwa kwezempilo. Kucacile ukuba umntu omncinci ohlala kwindawo yokuzivocavoca unengxaki yokuzithemba. Mhlawumbi kwiiklasi ezincinci wayecaphukisiwe ngabalingana abanamandla. Okanye kumantombazana amdala awazange amthande. Yaye ingqondo yakhe igxininisekile: ukuhlonipha abantu, omnye makomelele, ukuba abafazi bathanda-bahle. Ayikho indima encinci edlalwa kwiimpawu ezithile ezichazwe ngamaphephandaba: umntu ophumelelayo kufuneka abe ne-Schwarzenegger's musculature okanye ubuncinane i-Diesel. Ekugqibeleni, nawe ulingela i-90/60/90 efanelekileyo.
Ngenxa yokuba uyabonakala kwaye unamandla. Oku kuhloniphekile. Kwaye wonke umntu ojikelezayo unomona (nangona ungathethi ngokukhawuleza ngawo).
Ukukhathazeka ngokungathandekiyo kunye nezihloko eziqhelekileyo kwingxoxo. Ngokomgaqo, sinesiphako salo nawuphi na umntu onomdla wokuloba: abalobi bathetha ngokuloba, abalandeli bathetha ngebhola, abaphathi be-stockbrokers bathetha ngamaphesenti ... Ewe, abakhi bomzimba bathetha malunga ne-biceps kunye ne-triceps. Enyanisweni, abalobi kunye nabathengi abaxhaphazi kakubi. Ngoko, ngokungafani ne-tellystroiteley ngokuqhelekileyo abacaphukisi amantombazana abo ebhedini.
Zilungelelanise kwaye zinyamezele (nganye inokwehluleka kwayo), okanye uqeqeshwe nayo - uya kuba nento yokuthetha ngayo. Uya kufuneka ujonge ukutya kwakhe. Mhlawumbi kulungele ukubuyela kwisigqirha sezengqondo okanye umgulane oza kukwazi ukumnceda loo mfana ukuba ukubonakala akubalulekanga kwaye kunye nezitho zangaphakathi kufuneka zinyamekele.
Akaze a buhlungu nantoni na. Kwaye oko kukufaneleka kwakhe. Ubuncinane, ucinga njalo. Ngomso uhlafuna i-oats ehlume, kuba iphucula i-digestion, ngenxa yezizathu ezifanayo, ukusela i-kefir ebusuku. Wathela amanzi abandayo kwaye wagijima egijima epakini. Kwivenkile, ufunda iilebula ukusuka ku-I, ufunda imihla yokuphelelwa yisikhathi, uyabetha, uyathintela, uzive evakalelwa kwaye angathandabuzeki. Kwizifo zakho, uyaziphatha ngokunyaniseka nokuphazamiseka, ekholelwa ngokunyanisekileyo ukuba kuzo zonke izifo zomzimba wonke umntu uyasola. Uya kuyidla kunye nayo i-oats echithekileyo-kwaye uya kuvuya.
Kodwa into eyona nto yinkathazo kukuba uxoxela iinkcukacha zokugaya kwakhe kunye ne-metabolism. Yaye le nkulumo malunga ne-physiology iyanqanda ngokupheleleyo ukutya kwakho.
Ngokuqhelekileyo, loo mpilo yokubonakalisa iyona ndlela ifana ne-hypochondria. Umntu ukwesaba ukugula kunye nokufa, kwaye zonke iingcamango zakhe kunye nezikhwepha zijoliswe ekukhuseleni le ngozi. Mhlawumbi, kwakukho ingcamango ebuncinci yabantwana. Ngokomzekelo, umkhulu wam oyintanda wafa, kwaye wonke umntu ojikelezayo wathi: "Oo, ukuba wayeyeke ukutshaya ngexesha, wayesenokuhlala kwaye aphile!" Ngengqondo yomntwana oku kubhaliwe njengobunzima obunzima bokubhema kunye nezinye "izinto ezinobungozi."
Ngokuqhelekileyo, i-hypochondria efihliweyo ngumveliso weengcamango eziphambili zokucinga. Le nsizwa yabona ingxelo yeTV malunga neendiza zeerati kwisitolo se-sausage-konke oko! I-sausage ayiyi kuthintela. Kodwa, ekubeni isihloko sokugula nokufa siyaqhubeka simphazamisa, uhlala ekhuluma ngayo. Mhlawumbi ngefomu: "Hayi, ungayifaki ushukela etazini, inetyhefu!"
Endaweni ethile kwizinzulu zakudala zengqondo yethu engacatshulwayo isilungele umfanekiso wesilwanyana. Umsebenzi wakhe ukubulala i-mammoth nge-fist, ukukrazula ikhaya le-carcass, ulwahlule konke, uze ulume inyama ebikiweyo ngokutya ngamazinyo aqinileyo. Ngako oko, umntu odla ibhokhwe enye kubangela ukusola. Yaye ukuba naye usoloko echaza ngeenkqubo zokutya kwakhe emva kokutya oku kulandelayo!
Kwiingcamango, iingxoxo zesayensi zesayensi kuphela ziyakucasula. Ewe, mnike inkulumo kwimigaqo yokuziphatha etafileni! Ukuba ucaphukile ngenxa yokutya kwakhe, uyaxolisa, ingxaki ikuwe. Indoda inelungelo lokutya ngendlela ayithandayo. Kwaye ugijima ekuseni. Uze uthele amanzi abandayo. Ngokukodwa ukuba le ndlela yokuphila kunye nesondlo iphilile kwaye iyanciphisa ubomi. Futhi imemori yezofuzo ... Mxelele ukuba izidlo zamadoda, zibulala i-mammoth ne-fist, zihlala zihlala zingama-30 zize zizolile kwaye zizame i-oats. Unalo lonke ithuba lokuphila kungekuphela nje ngokuvuya, kodwa nangona ixesha elide.
Xa "indoda" ebudlelwaneni yintombazana
Iintlobo zamadoda kufuneka zityatywe
Umthandane otshatileyo - kuyimfuneko?
Indlela yokwenza ngayo ukuze loo mntu azinikezele ukudibana
Iimpazamo zesetyhini ezinxulumene nomyeni wakhe
Indlela yokuqiqa kwiindawo zekhofi
Indlela yokukholisa indoda yakhe ukuba ndivumele ukuya kwelinye idolophu?
Izinto ezinama-Top-5 ezifake izinto eziphathekayo ebusika ngo-2017
Iindlela zokudibanisa ngokukhawuleza isikhala kunye ne-tippet
Ikhekhe le-Cheese nedill
Izihlobo zikaZhanna Friske zifuna ukuxosha uDmitry Shepelev waseRashiya
I-Crab ifake isaladi
Indlela yokuhlobisa iholo lomtshato?
Ukuhlaselwa komsindo kubantwana
I-Pasta ene-asparagus, iimbotyi kunye ne-avocado
Kuthekani ukuba umntwana unesisindo esingaphezulu?
Izizathu zokuqhawula umtshato kwintsapho
Ikhekhe leSan nge amajikijolo kunye nama-meringue